Hoyga - Migrationsverket
Haddii aanay haysan meel aad ku sugto marka go'aan kiiskaaga laga gaadhaayo, Xafiiska Socdaalka ayaa ku caawin kara adiga. Waxa kale oo aad dooran kartaa inaad adigu hoy raadsato, tusaale ahaan qaraabada iyo asxaabta. Haddii aad adigu hoygaaga is dabarto, waxaanu u baahan nahay inaad noo sheegto cinwaanka, si ay Hay'ada Socdaalku kuula soo xidhiidho.
La joog Hay'ada Socdaalka Swiidhan
Hay'ada Socdaalka Iswiidhan waxay ku siinaysaa hoy ku meel gaadh ah marka aad sugeyso go'aankaaga. Hay'ada Socdaalka ayaa kaa bixinaysa hoyga haddii aanad haysan wax maal ah.
Waxaad joogi doontaa meesha ay meeli ka banaan tahay
Haddii aad u baahan tahay caawimda Hay'ada Socdaalka, ma heli doontid inaad doorato meesha aad deganaanayso, iyadoo ay tahay inaad ogolaato meesha boos banaan lagaaga helo. Waxa suurto gal ah, marka aad sugeyso go'aankaaga, waa inaad u guurto hoy cusub si aad dad kale ugu banayso.
Waxa laga yaabaa inaad qol la wadaagto
Hay'ada Socdaalka hoygeeda waxa kaliya loogu talo galay dadka qaxooontiga ah. Haddii lagu siiyey hoy, taasi waxay saameynaysaa adiga oo kaliya uun. Hoygu waxa uu inta badan ka kooban yahay guri lala wadaagaayo dad kale. Qoysku waxay inta badan heli doonaan qol gooni ah. Dadka kaligood ah ayaa laga yaabaa inay la wadaagaan qol dadka kale ee ay isku faraca yihiin.
Haddii aad sabab uu ugu baahan tahay in wax gaar ah laguu sameeyo, waa inaad la hadasho xafiiska qaabilaada. Hay'ada Socdaalka ee Iswiidhan waxay ahmiyadeedu tahay in qof kasta oo degan hoygooda uu dareemo inuu amaan ku yahay bay'adooda degaanka. Waxa muhiim ah in dhamaan dadka jooga hoygayaga ay is ixtiraamaan oo ay is qiimeeyaan, iyadoo aan loo eegeyn diinta, dhaqanka ama galmadooda.
La hadal xafiiskaaga haddii aad tahay LGBT oo u baahan hoy gooni ah oo baahidaada ku saabsan. Waxaanu sameyn doonaa waxaanu karno si aanu xal kuugu helno aad amaan ku dareemayso oo adiga kugu wanaagsan.
Marka xuquuqda hoyku ay dhacayso
Waa inaad ka guurto hoyga haddii dalabka la soo diidey ama wadanka lagaa mastafuriyey, iyo go'aanka la meel marinaayo, ama marka xiligii loo qabtey inaad iskaa wadanka kaga baxdo uu dhamaadey. Taasi waxay khuseysaa dadka waaweyn ee aan la deganeyn carruur ka yar 18 sanno oo ay masuul ka yihiin.
Haddii aanad doonayn inaad deganaato hoyga Hay'ada Socdaalka, waxaad raadsaan kartaa hoygaaga. Dad badan ayaa doorta inay la deganaadaan asxaabta ama qoyska marka ay sugayaan go'aan dalabkooda qaxoontiga ah. Haddii aad doorato inaad raadsato hoygaaga, waa inaad iskaa iskaga bixiso kharashka hoyga kaligaa.
Haddii sabab uun aanad u joogi karin hoyga aa kaligaa qabsatey, waxaad u soo guuri kartaa mid ka mid ah hoyga Hay'ada Socdaalka ee ay meeli ka banaan tahay. La xidhiidh xafiiska aad ka diiwaan gashan tahay si aad u hesho macluumaad dheeraad ah.
Haddii aad doorato inaad joogto hoyga Hay'ada Socdaalka iyo haddii aad adigu raadsato hoygaagaba, waa inaad ku xidhnaato Hay'ada Socdaalka oo ay kula soo xidhiidhi karaan. Xasuusnow inaad xafiiskaaga qaabilaada soo wargilso cinwaanka cusub haddii aad guurto xiliga aad sugeyso.
Haddii aad joogi kareyso
Adiga degan hoyga Laanta Socdaalka waxa aad caawin ka heli kareysaa Laanta Socdaalka si aad u hesho hoy cusub marka aad hesho deganaansho. Waxa aad sii deganaan kareysaa hoyga Laanta Socdaalka ilaa inta ee Laanta Socdaalka ee kuu helayaan hoy cusub. Hadii aad degantahay hoy adiga aad leedahay ama aad hesho dagenaasho shaqo darteed, adiga ayeey tahay in aad raadsato hoy cusub.
Ka sii akhri wax dheeraad ah ee ku sabsan waxa dhacaaya haddii aad hesho ogolaansho abadiyan ah
Ka sii akhri wax dheeraad ah ee ku sabsan waxa dhacaaya haddii aad hesho ogolaansho kumeel gaadh ah
Degidda xarumaha hey’adda laanta socdaalka dadka
Waxa loogu talagalay shakhsigaqofka khaniiska ah ee doonay magangalyada